Dhageyso Barnaamijka Booqashada Andalus 24-12-1438 Hijri. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Barnaamijka Booqashada Andalus 24-12-1438 Hijri.
September 15, 2017 7:02 pm Views: 459
Barnaamijka Booqashada Andalus waa Barnaamij Todobaadle ah oo ka baxa Idaacada Islaamiga ah ee Andalus Maalinta Jimacaha,barnaamijka waxaa todobaad walbo lagu booqdaa Magaalada ama degmada ama deegaanka ama goobta xilligaasi la isdhihi karo waa muhiim booqashadeeda.
Todobaadkan Andalus waxey barnaamijka Booqashada Andalus ku booqatay oo ay kusoo gudbisay Toban Sano kadib hormarka ay ku tilaabsatay magaalada Jilib ee gobalada Jubbooyinka.
Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Booqashada Andalus.
maxamed nuur kamsuuma
Asc wllaha allandulus waaa radio kali an jaceylahy inaaa malin kasto an dhageyssto iyo aflaanta jihaadka balse manta waxaa idanka codsanaaa inaad barnaamishkaa boqoshada adan kalowin degmada kamsuuma o ah magalda oga horeysi laga taagay raayada toooxidka gobalada jubooyinka rag badan ku dhashay kamsuuma kaali weyne ka qaatay dalgaalanka kufaarta iyo murtdiinta qar kamid allah shahaado ku siye anigna haddan nahy dhalinta rer kamsuuma waxaa mar kasto diyaar u nahy inaaa nafteen iyo maalkena uhurno difaac diinteena islaamka mel allah dartiisa ayaaa idan jaceylahy
Assalaamu caleykum waraxmatullhi tacala wabarakaatuhu?walaalah wa salaamantihiim dhamaantiinba walaalayaal waa ku mahadsan tihiin sida wanaagdan ee ad noogu tabisiin wararka xawiiqda ah iyo waliba barnaamijyada baaxada weyn ee jihaadka iyo arima badan oo wax tar u leh umada islaamka waxaana idin leeyahay baarakallhu lakum ale haa idin siiyo fidunyaa wal aakhira aamin noo sii wada kheyrka insha allah